Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii December ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey – Gool FM
Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii December ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Dajiye January 6, 2020
(La Liga) 06 Jan 2020. Waxaa lagu dhawaaqay xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii December ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Xiddiga kooxda Barcelona ee Luis Suárez ayaa ku guulaystay laacibkii ugu fiicnaa bishii December ee horyaalka La Liga dalka Spain kaddib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa awood u yeeshay inuu dhaliyo 3 gool, wuxuun sidoo kale caawiyay 7 gool kale, kaddib 6 kulan uu ciyaaray bishii lasoo dhaafay ee December, taasoo ka dhigan inuu ka qeyb qaatay 10 gool ay dhalisay kooxda Barcelona.
Dabcan xiddiga reer Uruguay ee Luis Suárez ayaa wuxuu door weyn oo muhiim ah ka qaatay dhamaan guulahii ay gaartay kooxda Barcelona bishii lasoo dhaafay ee December.
Luis Suárez ayaa wuxuu sare u qaaday tirsiga goolashiisa, wuxuuna dhaliyay 11 gool, si uu u ceyrsado saaxiibkiis Lionel Messi oo ku hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka La Liga 13 gool, weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema oo isna kaalinta labaad ku jira ayaa dhaliyay 12 gool.
“Takumi Minamino waa laacib cajiib ah” – Jürgen Klopp